Adaptera Shim, Arrow Aluminium, Tifitifitra bala - Kelu
Fihazana & zana-tsipìka
Ireo singa hafa
Fizarana fitaovana fitsaboana
Fanerena ny tsindry
Momba ny KELU TECH
FOMBA ANJARA Lavorary
Tsarovy ny ductility excellet sy ny plastika amin'ny vokatra izay nifanaraka tamin'ny hamafin'ny sy tanjaka. Mety amin'ny faritra mivory isan-karazany.
Afaka mamokatra faritra sarotra, firafitra famolavolana sarotra izay mety tsy ho tsapan'ny teknolojia hafa. Fampiasana fitaovana: hatramin'ny 95% sy ambony.
Fandeferana amin'ny refy: ± 0,02mm fandeferana lanja: ± 0.2g Halatra eo ambonin'ny: 1 ~ 1.6um
Volana 1200kg isan'andro sy 30 taonina isam-bolana, na dia amin'ny kojakoja kely aza. Poductivity, ambany ny vidin'ny asa ary ny fahamendrehana ambony.
Tungsten manavesatra lanja
Tungsten lanja kankana
Tungsten Drop Voatifitra lanja
Tungsten mamindra tsy misy puce
Tungsten Pagoda lanja
NY lanjan-barilan'ny barika
Tungsten Ball lanjany
vatosoa tungsten sinker
lanja mahazatra tungsten
Hombo ny hoho / Pogoda
Sinker an-drotsaka baolina
Ferrule fihazana sy zana-tsipìka
FAMPIDIANANA ARROW BRASS
TONGSTEN GOLF PLUG
Lanjan'ny torohevitra GOLF
SCREW momba ny CUSTOM
Lanjan'ny toro-hevitra TUNGSTEN
Zana-tsipìka vy vy
Ampiasao ny teknika MIM (Metal Injection Molding) hamokarana ireo kojakoja vita amin'ny vy vita amin'ny Tungsten, Brass na Stainless Steel izay azo ampiasaina ho an'ny broadhead of hunter, bait ary tackle of fishing, kojakoja golf, barika dart, vakana fitifirana sy jono , fiarovana amin'ny taratra ary fitaovan'ny fitsaboana, singa firavaka sns.
Ny milina tsirairay na miaraka amin'ny dingan'ny MIM arakaraka ny fangatahana takiana, toy ny lohan-tsipìka, ferrule, zana-tsipika miendrika zana-tsipìka ho an'ny fitaovam-pitifirana sy fihazana zana-tsipìka, teboka fanaovana zana-tsipìka sy zana-tsipika, adapter plug ho an'ny kojakoja golf,
Mamolavola bobongolo avy amin'ny ekipa injenieran'ny KELU izay manana fanandramana folo taona mahery. Spccilized amin'ny lasitra mazava tsara mifandraika amin'izany, ao anatin'izany ny lasitra fanindronana sy ny haben'ny haben'ny ekipa KELU dia manome antoka fa ny marina kokoa sy ny vidiny ambany amin'ny fampiasam-bola.
Mirary soa indrindra avy amin'ny KELU amin'ny taona 2021
Androany no andro fiasana voalohany amin'ny 2021. Amin'ity fotoana ity dia mandray ny firariana tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay rehetra ny ekipa KELU. Faly 2021! Tratry ny taona! Maniry ny hambinina kokoa ny orinasanao amin'ny 2021! Mirary anao sy ny fianakavianao ho salama sy ho sambatra amin'ny 2021! Maniry ny virosy hanalavitra anao sy ny olona rehetra ...
Tungsten: Ny fanahin'ny indostrian'ny miaramila
Ho an'ny indostrian'ny tafika, ny tungsten sy ny alloys dia loharanom-pahefana tsy dia fahita firy, izay mamaritra betsaka ny tanjaky ny tafika iray firenena. Mba hamokarana fitaovam-piadiana maoderina dia tsy afa-misaraka amin'ny fanodinana vy izy io. Ho an'ny fanodinana vy, ny orinasa miaramila dia tokony hanana k ...
Inona ny lanjan'ny jono vaovao?
Ao amin'ny tsenan'ny jono sinoa, ny feo dia tsy misy ifandraisany amin'ny meterialerial firaketana, fa any Amerika Avaratra, ny tungsten dia efa matotra sy malaza toy ny famokarana firaka nandritra ny taona maro. Ny mpitrandraka fanjonoana tungsten dia mazàna ampiasaina amin'ny jono amin'ny fomba fanjonoana. Ny fomba fanjonoana fitarihana dia tany Eoropa no voalohany ...
Ny maha-zava-dehibe ny fifehezana ny mari-pana ao amin'ny MIM
Araka ny fantatsika, ny fifehezana ny mari-pana no lakilena ilaina amin'ny fanodinana hafanana rehetra, ny fitaovana differnet dia mitaky fitsaboana isan-karazany, ary na ireo fitaovana mitovy amin'ny hakitroka samihafa aza dia mila fanovana ihany koa amin'ny fanitsiana ny mari-pana. Ny mari-pana dia tsy ny fanalahidy lehibe ho an'ny pr ...
Fa manontany momba ny vokatra na pricelist anay,
IANAO VE NY KELU anao dia mizara voafetra